Imithombo umthetho kuyindlela yokukhuluma zangaphandle kwayo okuqukethwe, fixed ngokusemthethweni. Kufanele ngaso sonke isikhathi kufanele ukhumbule ukuthi nefomu zangaphandle, kukhona isakhiwo sangaphakathi wemboni embuzweni.
ERussia, kukhona dokhumenti, equkethe wonke amalungiselelo, ngokuvamile imelele zonke izindawo umkhakha. Lo mbhalo uMthethosisekelo wezwe.
Ukuze umkhakha ngamunye Amathrendi athuthukile bezimiso zawo imithetho. Ngokwesibonelo, imibhalo yemithetho kamasipala - lokhu, ngaphezu uMthethosisekelo, imithetho kahulumeni, izimiso, izinkampani zikahulumeni, imithetho kamasipala kanye neziyalelo zomthetho ngamazwe.
Kufanele kuqashelwe ukuthi uMthetho-sisekelo wase indawo ukuzibusa wezwe livikeleke njengenye izisekelo uhlelo eyakhelwe ngaphezu komthethosisekelo. I-Basic Law Isahluko 8 Sizokwenza ukulawulwa normative zohulumeni basekhaya. Kumele kuqashelwe ukuthi le inhloko kwezinkambiso ngokomthethosisekelo kungukuthi isiphelile. Ngakho, Isigaba 3 livikeleke ilungelo abantu inkululeko yabo, kokubili ngqo futhi ngokusebenzisa neziphathimandla zendawo, yiSigaba 8 siyakuhlwithwa waqaphela futhi avikelwe ngokubusa indawo ubunikazi. I-Athikili 9 kunqunywa ukuthi uhlobo izinsiza kungenziwa okungewakho iziphathimandla indawo nokunye.
imithetho yamazwe njengoba yemithetho, libonise indawo, zomthetho, kwezomnotho, izimiso yenhlangano jikelele, ngesisekelo okuyinto uhulumeni wendawo kusekelwe. Ngesikhathi esifanayo lezi zimiso ichaze futhi liqinisekisa isimo neziphathimandla zendawo.
umthetho Federal iqinile zokulawula nohlaka olubhekele zohulumeni basekhaya. Lolu hlaka siqukethe lokhu okulandelayo yemithetho: kuMthethosisekelo, ngokomthethosisekelo federal imithetho, izimiso kanye yokutholwa ngokuvumelana kubo ngalokhu noma ezinye lomthetho iziqondiso, kanye nezimiso, izinqumo zithathwa at referenda wendawo noma imibuthano civil kanye nezinye izenzo.
Kwatholakala ukuthi Russian - isimo federal sakhiwa izifundo. Imithombo umthetho izifundo - imithethosisekelo yabo (izimiso). Ababandakanyeka ukulawulwa neziphathimandla zendawo.
Ngaphezu kwalokho, njengoba imithombo kamasipala umthetho isenzo neziqondiso ezikhishwe ezingeni indawo. Le mibhalo, kanye neziqondiso nokazwelonke, abe lelimcoka umbuzo imisebenzi amayunithi indawo futhi neziphathimandla zendawo. Isakhiwo nemithetho kamasipala zihlanganisa izimiso, imithetho, eyamukelwa ukubuthana izakhamuzi (inhlolovo sendawo), imithetho, imiyalo nezinqumo yomzimba ummeleli, isahluko wendawo, ezinye izikhulu nalapho emizimbeni njengombana kuhlathululiwe kumThetho-isimiso.
Njengoba yemithetho nezincomo zikamasipala ezibhekwa ngayo umthetho wamazwe ngamazwe kuyinsakavukela. Ziyakwazi iyingxenye ebalulekile isimiso somthetho sangaleso isimo. Uma isivumelwano samazwe onke imithetho fixed ukuthi sihluke noMthetho kaZwelonke, namazinga omhlaba asetshenziswa.
Njengoba kushiwo ngenhla, uMthethosisekelo ungumthombo oyinhloko umthetho eRussia. It uwalungise wonke amalungiselelo angokomthetho jikelele. Abayona ngaphandle futhi imithetho namasiko umthetho. Lomkhakha kulawulwa kokubili yomthethosisekelo kanye nezinye izenzo neziqondiso. Ikakhulukazi, imithombo yomthetho amasiko - imithetho kuvunyelwene ngaphansi kwesisekelo efanele (amasiko) we-sithombe, kanye nezinye izenzo equkethe amazinga zokulawula ezifanele. Lesi sigaba futhi sisebenzise izimiso (kokubili Uhulumeni kanye uMongameli), kanye oda nezinye, imiyalelo, iziqondiso kanye nezidingo.
Ukuthengiswa okulawulwayo - kuyini? Ukuthengiswa okulawulwa phakathi kwamaqembu ahlobene
Yikuphi bathembele izinzuzo eChernobyl Veterans
Izinhlobo zezindlela zomphakathi
Izikhangibavakashi ngesitimela induduzo. Linezingxenye ezitimeleni
Emathileyi eyenziwe iphephandaba amashubhu: isigaba master Wabasaqalayo
Uchungechunge oluthi "Isihlabathi": abalingisi, izindima
Ukulwa namagciwane ukusiza izidakamizwa 'Ameksin'. Izibuyekezo. Isikali
Yasmina Rossi. imfihlo intsha
Plus, uma uthanda. "Contex" imikhiqizo: amafutha (izinhlobo)